Xeebaha ugu fiican ee Brittany, Faransiiska
Xeebaha ugu fiican ee Brittany oo ka yimid Cap d'Erquy ilaa Jasiiradda Quiberon
Xeebaha ugu fiican ee Brittany ee ka soo jeeda waqooyiga Brittany Cap ilaa Jasiiradda Quiberon
Brittany waa xeebta labaad ee ugu caansan fasaxyada Faransiiska ka dib markii ay Mediterranean. Laakiin in ka badan 2,000 oo kilomitir oo xeebta ah, waxaad marwalba ka fogaan kartaa dadkii soo booqday ee halkan u socda ee fasaxooda.
Brittany waxay leedahay wax kasta oo aad dooneysid: xeebaha dhaadheer, caleemaha madaw, mulkooyin dhagaxyo ah oo buuxa barkadaha kalluunka iyo xayawaanka qolofta leh halka xeebaha qulqulatadu ay si aad ah ugu dhacaan hirarka bada ee bada hoosteeda. Waxaana la ogsoon yahay qaar ka mid ah kuwa ugu wanaagsan, iyo kuwa cusub, kalluunka iyo makhaayadaha shellfishka ee Faransiiska. Brittany waa mid ku habboon fasaxa xagaaga, laakiin sidoo kale waa istiraatiijiyad jilicsan ee xeebaha xilliga jiilaalka, marka hirarku uu ka soo horjeedo xeebaha iyo talooyinka markabka iyo tahriibiyeyaasha si ay maskaxdooda u noqdaan.
Bretons waa kuwo madaxbannaan, dad leh dhaqdhaqaaq xoog leh Celtic. Waxaad ka heli doontaa meesha ugu fiican ee loogu talagalay fasax-ka-dhan-dhan-dhan-fasax.
Halkaan waxaad ka heleysaa tilmaan ku saabsan xeebaha ugu wanaagsan ee xeebta ka soo jeeda Cap d'Erquy oo ku yaal waqooyiga Brittany Cap wareega koonfureed oo dheeraad ah oo ku yaal xeryaha Quiberon.
Khariidadda xeebaha ugu fiican ee Brittany
Waqooyiga Brittany - Cap d'Erquy
Waqooyiga Brittany Coast Sawirada Getty Images / Anger O
Galbeedka Saint-Malo iyo bariga St-Brieuc, Cap d'Erquy waa ciriiri yar oo xeebta waqooyiga Brittany Cap leh sagaal xeebood. Waa mid adag oo qurux badan leh dhagaxyo dhagax qallafsan oo qallafsan ayaa hoos u dhacaya badda. Sidoo kale waa dabeecadda dabeecadda, sidaas darteed waxaa jira meelo badan oo ah xayawaan iyo fauna oo ku yaala hareeraha xeebta. Wixii Cap d'Erquy badanaa wuxuu ka soo baxay Brittany.
Haddii aad la joogtid qoyskaaga, isku day inaad ka mid tahay Plage de Caroual; haddii aad dareentid inaad macquul tahay, ku soco qulqulka meesha aad ka ogaan doonto waddooyinka ka soo jeeda geedaha geedaha ah iyo muuqaalka xeebaha yaryar ee qarsoon. Cap d'Erquy ayaa si fiican u yaqaan Faransiiska, inkasta oo ay iska indha-tireen jinsiyado badan oo kale.
Helaan heshiisyada ugu fiican ee kuyaala magaalada Saint-Malo ee la yiraahdo TripAdvisor
Waqooyiga Brittany - Baie de Lannion
Pink Granite Coast, Brittany. © CRTB / Martin Schulte-Kellinghaus
Dhamaan farxada - oo si sax ah loogu magacaabo "Pink Granite Coast", xeebta Baie de Lannion, oo loo yaqaan Grand Plage de Goas Lagorn, ayaa loogu talagalay qoysaska leh carruurta yaryar. Ku raali noqo nafta qunyar-socodka hawlaha, laga bilaabo dabeylo-duufiska ilaa kayaking. Baaxadda xeebta waxay ku socotaa waqooyiga Brittany Cap u dhexeeya magaalooyinka Celtic ee Lannion iyo Trébeurden.
Wixii macluumaad dheeraad ah, arag Hagaha Baie de Lannion
Soo qaado safarradii ugu wanaagsanaa ee Lannion ee ku yaala magaalooyinka
Meneham, waqooyiga Finistere
Meneham Brittany. Getty Images / LECLERCQ Olivier hemis.fr
Si toos ah galbeedka Roscoff, waxaad aadi kartaa Ménéham oo ah wadada kaliya ee wadada waqooyiga ee Kerlouan. Tuulada lafteedu waa meesha ugu sareysa ee qulqulatadu waa meel aan caadi ahayn oo leh xarumo dhagxan oo lagu dhex dhajiyo dhagaxyo waaweyn oo ka dhigaya meeshii ay u muuqan lahayd in uu jiro dagaal u dhexeeya laba kooxood. Waxaad ku wareegi kartaa xeebta qulqulaya, ama hoos u dhigta Brignogan-Plages xagga bari.
Ka hel shirkadaha ugu fiican ee ku yaala Brignogan-Plages (oo ku dhow dhow Meneham) oo leh hudheello
Baie d'Audierne, Finistere
Audierne Bay, Brittany. Sawirada Getty / Philippe Giraud
Xeebta galbeed ee Finistère oo ku taal Pointe du Raz, Baie d'Audierne waa dhul dhan 30-kilomitir oo dhul ah, kaas oo ku dhajinaya dhinaca geeska koonfureed. Xeebta galbeedka, Baie des Trépassés waxay u egtahay dhammaadka adduunka. Raadinta Ile de Sein, ka dibna ka baxsan, tani waa goob fiican oo loogu talagalay fooriyaal oo doonaya hirarka dheer ee Atlantic.
La Pointe du Raz Xafiiska Dalxiiska
Wixii macluumaad dheeraad ah, ka eeg Hagaha Baie des Trépassés
Soo qaado safarrada ugu wanaagsan ee hotelka ee Audierne ee ku yaalla magaalada
Koonfurta Brittany - Jasiiradda Quiberon, Cote Sauvage
Jasiiradda Quiberon, Brittany. © Donatienne Guillaudeau / CRTB
Jasiiradda Quiberon waa qurux badan oo qoto dheer oo boodbood ah oo ka soo baxaysa badda. Saint-Pierre-Quiberon waxaad ka heleysaa labada xeebood ee Plainhièvre Plages. Qeybta galbeed ee ujeeda dhinaca galbeedka oo u jeedda awoodda Atlantic waa meesha loogu talagalay. Goobta Grande, oo u dhexeysa Plouharnel iyo Penthièvre dhinaca bari waa mid aad u fiican haddii aad rabto inaad tagto sanduuqyada ciidda. Marka la eego Baie de Quiberon, qaybtan qeybta Quiberon-ka ayaa sidoo kale u fiican qoysaska. Guddiga xayawaanka ee u dhexeeya labada xeebood wuxuu leeyahay dukaamo iyo makhaayado badan oo loogu talagalay nasashada dabaasha.
Xafiiska dalxiiska ee Quiberon
Wixii macluumaad dheeraad ah eeg Hagaha Saint-Pierre-Quiberon
Helaan heshiisyada ugu fiican ee kuyaala Saint-Pierre-Quiberon ee ku yaala magaalooyinka
Belle-Ile - Jasiiradda Quiberon
Belle Ile, Brittany. © CRTB
Bixinta wabiga laga bilaabo Quiberon ilaa Belle-Ile, jasiiradda ugu wayn ee Brittany iyo caan ku ah ururadooda Dumas ' Three Musketeers and Man in Maskadda Birta . Waa meel qurux badan leh xeebaha cajiibka ah, gaar ahaan les Grand Sables oo u jeedda bariga Faransiiska. Waxaa jira dhowr magaalo oo yar; Xoojinta Le Palais; Sauzon iyo gudaha Bangor.
Ka hel heshiisyadii ugu wanaagsanaa ee Hotel ee kuyaala Sauzon oo leh hudheello
La Baule-Escoublac, Brittany. Sawirada Getty Images / Loic Lagarde
La qabsiga Belle-Île laakiin dhinaca koonfureed ee ku yaal jasiiradda Guerande, La Baule-Escoublac ayaa si gaar ah loogu caanbaxay xeebta dheer ee caanka ah ee Baie de la Baule. Waxaa jira fursado fara badan oo loogu talagalay isboortiyada kala duwan, oo ay ku jiraan fuulid baaskiil dheer oo jahwareer leh.
Soo qaado safarrada ugu fiican ee kuyaala La Baule-Escoublac ee ku yaalla magaalooyinka
Pont Aven, Brittany Ferries ilaa France. © Brittany Ferries
Brittany Ferries waxay ka timaadaa Portsmouth ilaa St-Malo iyo Plymouth ilaa Roscoff
Fiiri safarka Ferry
Garoonka diyaaradaha ee Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo waxaa duulimaadyada maalinlaha ah ka socda East Midlands, London Stansted iyo Guernsey
Tareenka: Laga soo bilaabo Paris, TGV waxay tagtaa Rennes (2 saacadood 15 daqiiqo), St-Malo (3 saac) iyo Quimper (4hrs 25 daqiiqo)
Galbeedka iyo Koonfur Brittany
Cimilada: Duulimaadyada ka yimaada magaalo badan oo Faransiis ah waxay u duulaan garoonka diyaaradaha Quimper Cornouaille
Tareenka: Laga soo bilaabo Paris, TGV wuxuu tagaa Quimper (4 saacadood 18 daqiiqo)
More on Dalxiiska Brittany
Goobaha ugu sareeya ee Cannes, magaalada Riviera City
Sidee looga helaa London, UK iyo Paris ilaa Orleans by Train iyo Car
Gobolka Auvergne ee Faransiiska
Sete ee koonfurta ee France
Gobolka Jura ee Bariga Faransiiska
Meelaha ugu Fiican ee Qadada Qadada ee Pittsburgh Downtown
Makhaayadaha Caafimaadka leh ee ugu Fiican
Tilmaamaha TV-ga ee ugu wanaagsan oo la dhigo Brooklyn
Waxyaabaha Lagu Sameynayo Saddexagalka, North Carolina
Muhiimaddaada Safarkaaga ilaa Loicaa, Puerto Rico
Halloween ee Huntsville
Meelaha ugu badan ee ku yaal Dubai
Soojiidashada sare ee British Virgin Islands
Madrid oo Toledo: Qorsheynta Socdaalka Spain
8 Waxyaabaha Ugu Fiican ee Lagu Cuno Suuqa Pike Place Suuqa
Dhibaatooyinka Dhalashada ee Carruurta Ugu Wanaagsan ee Pittsburgh
Universal Studios Habeenkii Horraanta Horraanta - Hollywood
Dhakhtarada Khasaarada iyo Matxafka
Théâtre de Verdure: Xarunta Cilmiga Fanka ee Montreal